Guinea (/ ɡɪni / (Ku dhawaad ​​codka maqalka)), si rasmi ah Jamhuuriyadda Guinea (Faransiiska: République de Guinée), waa waddanka xeebta galbeed ee Afrika. Dalka Guinea waxaa lagu magacaabaa Guinea-Conakry, oo loo yaqaan 'Guinea' oo magaciisa la yiraahdo Guinea-Bissau iyo Equatorial Guinea. Guinea waxay leedahay qiyaastii 12.4 milyan iyo aag 245,860 kilomitir square ah (94,927 sq mi).
Guinea waa jamiir. Madaxweynuhu si toos ah ayuu u doortaa dadka, waana madaxa dawladda iyo madaxa dawladda. Golaha Qaranka ee Guinea ayaa ah hay'adda sharci-dejinta ee dalka, xubnaha xubnahana waxaa sidoo kale si toos ah loogu soo doortaa dadka. Waaxda garsoorka waxaa hoggaaminaya Maxkamadda Sare ee Guinea, maxkamadda ugu sareysa iyo kan ugu dambeeya ee rafcaanka dalka.
Dalka waxaa loo magacaabay gobolka Geeska Afrika. Guinea waa magac dhaqameed ee gobolka Afrika ee ku yaal Gacanka Guinea. Waxay u fidisaa waqooyiga iyada oo loo marayo gobollada gawaarida gawaarida uurka leh waxayna ku dhammaanayaan Sahel. Giriigga Guinea wuxuu si toos ah uga yimid erayga Portugal ee Guiné, kaasoo ka soo baxay qarnigii 15-aad ee ku saabsanaa dhulalka ku yaal Guineus, oo ah erey guud oo loogu talagalay dadka madowga ah ee Afrika ee ka hooseeya webiga Senegal, marka laga reebo 'tawny' Zenaga Berbers, oo ka sarreeya, oo loo yaqaan Azenegues ama Moors.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Guinea&oldid=218890"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 9 Oktoobar 2021, marka ee eheed 17:01.